Filipina : Nosamborina Ilay Filoha Teo Aloha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2011 11:38 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, 日本語, македонски, Italiano, English
Ny fanandraman'ilay Filoha Filipiana teo aloha ary mambra ao amin'ny kongresy Gloria Macapagal-Arroyo ny hitsaoka ny firenena da nahatonga ny fampiakaram-peon'ny olona tao amin'ny Twitter sy tany amin'ireo vohikalanà tambajotram-piarahamonina hafa.
Arroyo sy ny vadiny Jose Miguel Arroyo dia efa imbetsaka no nanandrana ny nandao ny firenena tato anaty andro vitsy, nanambara fa fitsaboana ara-pahasalamana ihany no tadiaviny any ivelany. Ireny andrana ireny dia voasakana, nahemotra satria ny fianakaviana Arroyo dia eo ambany fanadihadiana noho ny halatra, fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ary fanodikodinam-bato tamin'ny vanim-potoana naha Filoha azy. Arroyo dia Filoha ny taona 2001 ka hatramin'ny 2010.
Ny tsy fahombiazan'ny governemantan'i Noynoy Aquino hampakatra fitsarana an'i Arroyo eny fa na dia efa taorian'ny 500 andro naha-teo amin'ny birao azy aza no voalaza fa antony saika nahatanteraka ny fandosiran'ilay filoha teo aloha hivoaka ny firenena.
Didy fampisamborana iray noho ny “fanakorontanana fifidianana”no navoaka ho an'i Arroyo taorian'ny nilazan'ny Fitsarana Avon'i Filipina fa tokony ho afaka ny hivoaka ny ranomasim-be izy satria tsy misy vesatra mianjady aminy. Indreto ary ny fanehoan-kevitra sasany avy ao amin'ny Twitter :
@teddycasino : Amin-kafaliana lehibe no andraisanay ilay resaka didy fampisamboarana ny GMA. Nanomboka ny taona 2005 izahay no efa nanao izay hitsarana azy noho ny hala-tahaka, fangalarana ary ny lainga nataony. Izany dia valin'ny ezaka nataonay. Kanefa vao manomboka ny asa. Misy ady sarotra ara-pitsarana ao aloha ao ary raharaha maro tokony ho tanterahana any amin'ny fitsarana. Mankasitraka ny COMELEC, DOJ ary ny Pasay RTC izahay noho ny fihetsiny sy ny fanapahan-keviny.(fanamarihan'ny mpanoratra : Comelec dia masoivoho misahana fifidianana, DOJ dia departemantan'ny fitsarana)
@hgcastillo : Mba tiako ho fantatra ny fihetseham-pon'i GMA amin'izao fotoana izao….
@KikoHubilla : Manandrana mivoaka ny firenena i GMA mba hialany amin'ny fiampangana mihatra aminy.
@gibbscadiz : Tsara ny vokatra–fiampangana an'i arroyo– kanefa ny fahatongavany tamin'izany dia toy raharaha manokana, tsy mahavita azy, tsy matihanina araka ny tokony ho izy; tsy misy tokony hireharehàna.
@monsieurearl : tokony ho gadraina i GMA ! tsy misy indra-fo !
@NielZapanta : Isaky ny misy vaovao tselatra mikasika ny #arroyoarrest (fisamborana an'i arroyo), dia toy ny tantaram-piainana mivantana alefa amin'ny fahitalavitra..Araho ny seho manaraka…
@w3ncy : avotry ny fandrosoan'io raharaha io fisamborana an'i CGMA tamin'ity tolakandro ity i #itlognitopacio.
@carloshconde : tsy finiavana ara-politika ny androany. Fa fahakiviana, miaraka amin'ny governemanta mahatsapa tanteraka ny tambiny tsy maintsy hefaina raha sanatria tafatsoaka i Arroyo..
Ilay tenifototra#ArroyoArrest dia nalaza be tao amin'ny tontolon'ny Twitter taorian'ny famoahana ilay didy fampisamborana an'i Arroyo ny Zoma alina. Ilay tenifototra #itlognitopacio koa dia nalaza taorian'ny fampiraharahana nataon'ilay mpanolotsain'i Arroyo amin'ny resaka lalàna, Ferdinand Topacio fa esoriny ny bongany iray raha raha toa ny fianakaviana Arroyo ka tsy hiverina avy any ivelany.
Hajiantsary avy amin'ny pejy Twitpic @ HecklerForever no namoiasaina. Sary avy amin'ilay mpanao gazety amin'ny fahitalavitra, Jove Francisco.